Ra’iisulwasaaraha Itoobiya oo eedeyn u jeediyay Mareykanka | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Ra’iisulwasaaraha Itoobiya oo eedeyn u jeediyay Mareykanka
Ra’iisulwasaaraha Itoobiya oo eedeyn u jeediyay Mareykanka
Dowladda Mareykanka ayaa u gogol-xaartay tallaabo cunaqabateyn cusub oo dheeraad ah lagu saarayo dhinacyada ku dagaallamaya waqooyiga Itoobiya, halkaas oo kumanaan qof lagu dilay, malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo.
Amar fulineed cusub oo ka soo baxay Aqalka Cad ayaa u oggolaanaya Washington inay qaaddo tallaabo ciqaab ah oo ka dhan ah xubno ku jira dowladaha Itoobiya iyo Eritrea, Jabhadda Xoreynta Dadka Tigrayga (TPLF) iyo dowlad-deegaanka Amxaarada haddii ay door ka qaataan sii socoshada colaadda, carqaladeynta gargaarka bani’aadamnimada ama ay geystaan xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha ah.
Tallaabadan oo cadaadiska ku saareysa dhinacyada dagaallamaya inay yimaadaan miiska wadahadalka, ayaa timid kadib markii Washington ay marar badan ku baaqday in wadahadal lagu dhammeeyo colaadda iyo in gargaar la gaarsiiyo gobolka waqooyi ee Tigray, halkaas oo colaaddu ka bilaabatay.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay i nwarqad uu ra’isul warsaaraha Itoobiya Abyi Ahmed uu diray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu Mareykanka ku eedeyay inay ku gul-darreysteen inay ka taageeraan halganka ay kula jirto TPLF.
Wasiirka warfaafinta Eritrea iyo afhayeenka kooxda TPLF ayaan weli wax hadal ah ka soo saariin arrintan.
Previous articleDagaal ka dhacay degmada Buurhakaba & khasaaro ka dhashay
Next articleMidowga Yurub oo war ka soo saaray khilaafka Rooble iyo Farmaajo